A abantu ikhambi izintuthwane: indlela yokubhekana izinambuzane efulethini?
Homeliness, Pest Control
Izintuthwane - a izinambuzane eziwusizo kakhulu, kodwa kuphela uma ehlathini, hhayi endlini. Isikhathi esining impela e abantu ehlobo akutholayo nabo ukudla, ushukela, ezisemagumbini efulethini. Njengokuvamile, konakalisa ukudla, futhi kubuhlungu ngempela ukubukela sezinambuzane ukukhasa uhele ngabambelela odongeni ngihamba noma kukhasa phezu sill iwindi. Ngakho-ke, kufanele wazi kanjani ukuqeda izintuthwane efulethini.
Manje emakethe noma esitolo okukhethekile ungathenga eziningi imikhiqizo ehlukene, okuyinto okwenziwa ngendlela ukunyakaza isinambuzane. Lokhu kumele kwenziwe ezinsukwini ezimbalwa. inqubo Stop ingasetshenziswa kuphela uma izintuthwane wanyamalala ngokuphelele ekhaya lakho. Ukuze futhi ukubhujiswa okuphelele kwalelizwe zonke izilwane, ungasebenzisa isihlungu ezokwenza ukubulala izinambuzane abasebenzi kwesibeletho. Nokho, kufanele buhlanjululwe ithuluzi elincane ukuthi kungaletha intuthwane ushevu emgodini.
Ngakho kaningi kangakanani idatha kukhasa izinambuzane ekudleni, ikakhulukazi ushukela ke ukusetshenziswa kwezikhali zamakhemikhali kumele kube ngokuqinile elinganiselwe. Kulokhu-ke kungcono ukusebenzisa khambi Folk for izintuthwane. Indlela elula ukusiza okwesabisa away izinambuzane ekudleni kuyinto amafutha sunflower, njengoba awukwazi ukubekezelela iphunga.
Kukhona eyodwa abantu ikhambi Izintuthwane - clove nesweli, kanye parsley eziqongweni utamatisi, okuyinto aphumelela ngenxa yephunga abukhali. Kusukela utamatisi eziqongweni kungaba umhluzi, kamuva wafutha endaweni lapho izintuthwane waphawula kakhulu. Uma une usinamoni ogayiwe, ungakwazi ngempumelelo ukusebenzisa nakho.
Lokhu abantu ikhambi Izintuthwane, izinyosi, kuzosiza esikhathini esifushane sokuyenga izinambuzane nezidleke zazo futhi ababhubhise. Konke kwenziwa kakhulu ukumane. Kuyadingeka ukuba bathele isipanji noju ukubeka lapho izinambuzane ngokuvamile bashukumiseleka. Ngokushesha uma inamathele linani lelifanele izintuthwane, kungaba uphonswe amanzi abilayo. Ngokufanayo usebenza nge umbhubhudlo batheleka nentfo yekuphatsa lencane. Izinambuzane uzakuhamba lolo ngokwabo futhi minza in the ketshezi.
A abantu ikhambi izintuthwane kungcono ukusebenzisa ekhishini noma ezinye amakamelo, ikakhulukazi uma umndeni unezingane ezincane. Uma izinambuzane bahlukana ngaphandle emagcekeni kanye izihlahla umonakalo nezithelo ezihlabayo ke kukhona kungenzeka ukusebenzisa gel ekhethekile, aqukethe umthamo ethile ubuthi.
Ukulwa izintuthwane ingadi amakhambi abantu ziyasebenza ngempela. Ngokwesibonelo, ku-isiduli esikhulu, uma ivuliwe endaweni yakho, kufanele uthele ketshezi amnandi. Ukuze wenze lokhu, uthele inkomishi ushukela ibhakede lamanzi. Izintuthwane ukuhamba, njengoba amasheya abo ngeke ukudla spoilt. Lokho izinambuzane ungawoni izihlahla, akudingeki uqale. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwakha zonke izinhlobo zezithiyo, ezifana ukugoqa ucwecwe emhlabeni hhayi izintuthwane ukhuni akwazi ukugibela phezu usiko. Kungenzeka futhi ukuba umbe inkatho amancane azungeze izihlahla futhi lagcwala amanzi. Izintuthwane akakwazi ukubhukuda, ngakho uma ukusheshe izithelo izitshalo, ngeke minza.
Bee zobumba: incazelo, izindlela umzabalazo, amaqiniso athakazelisayo
Izifo amazambane nokulawula kwabo. Amazambane: nezilokazane nezifo
Izindlela eziningana indlela ukuze uthole izintuthwane aphume efulethini
Izindlela ezahlukene isikhunta
Izinambuzane eyinhloko strawberry futhi izindlela zokubhekana nazo
Silakho ku utamatisi. Izindlela emzabalazweni
Thenga amakha kanye pheromone kule ekhemisi: basebenza kanjani?
Njengoba nesibongo owaziwa Frolov yadalwa. umsuka
Okubonwayo Izikhangibavakashi e Nizhniy Novgorod
Ukuhlinzwa glaucoma, ukufiphala kwamehlo izizathu
Izimfihlo impilo nokuphila kade. Chaga Mushroom: indlela yenza kahle?
Slam - kuyini?
Steatosis Hepatic, ekwelapheni Ukudla, ubisi somkhaya, herbal
Diesel - kungcono ... zilwane, izinhlobo, izinhlobo, udizili amakilasi
Wamabele sokwenziwa. Imibono ka kodokotela neziguli
Ulenga semishayweni: izinhlobo, ukufakwa
Izinhlobo enemas, izinkomba ukusetshenziswa nokubekwa imishini. Yini okufanele ibe isixazululo enema
I-cram-ceramic ye-ceramic: incazelo yemigomo yomsebenzi nokulungisa